CIRC waxay ka falcelisaa Toogashada Aagga Denver ee Ba'an - Isbahaysiga Xuquuqda Soogalootiga Colorado
Isbahaysiga Xuquuqda Muhaajiriinta ee Colorado > In News > CIRC waxay ka falcelinaysaa Toogashada Aagga Denver ee Burburisay
Isbahaysiga Xuquuqda Soogalootiga Colorado (CIRC) ayaa soo saaray bayaankan soo socda si ay uga jawaabaan toogashadii burburisay ee Aagga Denver:
Waa qalbi aad u culus inaan tacsi u dirno qoysaska Alicia Cardenas, Alyssa Gunn-Maldonado, Danny Scofield, Michael Swinyard iyo Sarah Stec kuwaas oo si macno darro ah loo dilay fal kale oo rabshado ah Diseembar 27, 2021. Waxaan diraynaa jacayl. iyo xoog ku socota Jimmy Maldano iyo Ashley Ferris kuwaas oo ka soo kabanaya dhaawacyadii iyo dhammaan dadkii goob joogga u ahaa rabshadaha la fulinayo. Bulshadeena waxaa soo gaaray khasaare aad u xun.
Dhaxalka shaqada dhaqanka iyo bogsiinta wadaniga ah ee Alicia iyo Alyssa waxay ku dhex noolaan doonaan bulshada ay qayb firfircoon ka ahaayeen. Shaqadooda bogsiineed ee farshaxanka waxay sii socon doontaa kumanaankii ay ku shaqeeyeen sidii tattoo iyo daloolista farshaxanimada - taasi waa dhaxal lafteeda. Farshaxanka jeexjeexa iyo daloolintu waa safar ruuxi ah oo gundhig u ah dhaqamada asaliga ah, waxaanan nasiib u yeelannay bulsho ahaan inaan ka helnay waxbarista iyo farshaxanka nafahaas. Anagoo ah hawl-wadeenada bulshada ee taageera dadka asaliga ah, soogalootiga iyo xuquuqul insaanka, waxaan ognahay dhibaatada ay masiibadani u geysatay bulshadeena. Waxaan weligii uga mahadcelineynaa saameynta Alicia iyo Alyssa ku yeesheen dhaqdhaqaaqa xuquuqda muhaajiriinta.
Waxaan sii wadi doonaa dhaxalka naftii naga luntay annagoo ixtiraamayna noloshooda, shaqadoodii iyo la dagaalanka waxa naftooda u huray. Ma jirto meel bulshooyinkeena ah oo loogu talagalay cunsuriyadda, nacaybka, jinsiga ama rabshadaha. Waxaan si adag uga soo horjeednaa kuwa isku dayaya inay taasi soo dhex galiyaan bulshadeena, waxaanan sii wadi doonaa inaan ka dhigno gobolkan meel nabdoon oo cid walba ay ku noolaadaan nabad iyo wada noolaansho. Bulshadayada gobolka Denver, CIRC si adag ayay kuu garab taagan tahay markaan si wadajir ah u bogsano.